समय र आधुनिकीकरणको सिको गरेका हामीहरू | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
कतारमा प्रवासी नेपाली र चिनिया बीच मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल सम्पन्न →
समय र आधुनिकीकरणको सिको गरेका हामीहरू
Posted on 25/10/2010 by जय आले | १ टिप्पणी
नेपाल दक्षिण एशियाको एउटा सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक । जसको आफ्नै सान, मान र पहिचान छ । धेरै वर्ष अघि गौतमबुद्ध जन्मिएको शान्तिप्रिय राज्य भनेर विश्व सामु चिनाउने एउटा देश । सो मात्र हैन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश अर्को पहिचान । आज अर्को गौरवको कुरा विश्वको होचो मान्छे खगेन्द्र थापा मगरको देश नेपाल । हामी आज यो अवस्थामा आयौ । देशले नयाँ नयाँ उपलब्धी हात प्राप्त गर्दै गएको छ । बाह्र वर्षका कमल नेपाली पनि आरधना प्रधानको जीवन रक्षा गरेकोमा विश्व रेकर्डको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्दैछन् । उता अशिक्षित र शरीर नै नचल्ने झमक घिमिरे खुट्टाले लेखेर दुनियालाई चकित पार्दै आउदा नेपालले आफ्ना यस्ता छुट्टा छुट्टै पहिचान पाएको पाएकै छ । यी उपलब्धीहरू आफ्नो ठाउँमा छन् ।
हिजो हामीले हाम्रै देशमा भएका कुरालाई आधार मानेर हेर्‍यौं । सुनेका विषयलाई नै आधुनिकीकरणको सिको गरेको मान्ने गरेका थियौ । बाबु बाजेहरूले भन्ने गरेका कुरा र अध्ययन गरेका ती विषयवस्तुहरू ६ खोपी, १२ टोपी, ६ थर, १२ घर, ७ काजी, २७ खुडा, ५२ लाख हुदै गोर्खाबाट नौ कोटी राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि आधुनिकीकरणको थालनी गरेको कुरा हामी थाहा पाउछौ । आज सम्म पनि हाम्रा भाइबहिनीहरू आफ्ना अध्ययनका पाठयपुस्तकमा पढेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा एकीकरण गरेर नेपाल बनाए भनेर । नयाँ आधुनिकीकरणको समयमा आउदा निरपेक्ष शाहवंशीय राजतन्त्र समेतको शासन समय धेरै बित्यो । एउटा समय यस्तो बनेर आयो । यो पनि आधुनिकीकरणको चरण । राजा विरेन्द्रको वंशसहितको दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रको समयसम्म आइपुग्दा नेपालीले समयसँगै धेरै कुराको सिको गरे ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धका, एकीकरणका, सत्ता सङ्घर्षका कुरा आफ्नो ठाउँमा थिए नै । पछि फर्केर हेर्दा त्यो समय भएका कोतपर्व, अलौपर्व, मकैपर्व जस्ता घटनाहरू, राजनैतिक क्रान्तिहरू, छिटफुट हत्या र द्वन्द्व यी समय र त्यसका आधुनिकीकरणका सिको गर्दै रहेका अवस्था हुन् । जुन हामीले देख्दै आयौं । अहिले सम्मका घटना, राजनैतिक विकास र अभ्यासका आधारमा हामीले दृढताका साथ भन्नु नै पर्दछ, वि.स. २०५२ देखि २०६३ सम्म नेपाली आफ्नै आँखाले अर्को आधुनिकीकरण देखे । यसरी भन्नु पर्दा नेपाल र नेपालीको यस अवधिको समय र आधुनिकीकरण कारूणिक र मर्मस्पर्शी छन् ।
एघार वर्षसम्म नेपाली जनतालाई युद्धले ग्रस्त पार्‍यो । यसले नेपाली जनतालाई नै मार्‍यो र पीडा बढायो । नेपाल साँच्चिकै युद्धभूमि नभएको १०८ वर्ष भयो भन्छन् । यदी यो पंक्तिकारले अध्ययन गर्दा भेटेका कुराहरू सत्य हुन भने बेलायतीहरू जाइलाग्दा खेरि सन् १८१४देखि १८१६ सम्मको लडाई नै यहाँ पछिल्लो पटक भएको लडाई हो भन्ने अध्ययनका विषय बन्छन् । झण्डै दुई शताब्दीपछि फेरि नेपाली माटो रगतले भिज्यो, आफ्नै नेपाली रगतले यस्तो क्रुर, पाशविक, अमानवीय ढंगले यातना, एकले अर्कालाई हत्या गर्ने समय आयो । त्यो पनि आधुनिकीकरणको सिको गरेको समय भन्नुपर्छ ।
पत्याउनै गाह्रो लगभग १५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारांै टुहुरा, विधवा र अंगभग भए । दशौं लाख विस्थापित अरबौंको सम्पत्तिको बलि चढ्यो । पाशविक क्रुरतापूर्ण हत्या, अपहरण, नजरबन्द, बलात्कारजस्ता कुृकृत्यहरू भए । आखिर त्यसको उपज थियो समय र आधुनिकीकरणको सिको । यसरी सिको गर्नेहरू, मर्नेहरू सबै गरिब, निमुखा सर्वसाधारण नै परे । भनौ यो अभावबाट कुनै पनि नेपाली परिवार अछुतो रहेन । यो समयले यस्तो आधुनिकीकरणको सिको गर्‍यो, एकातिर अपार धनजन तथा राष्ट्रिय अस्मिताको अपुरणीय, अतुलनीय क्षति भयो । जसलाई एउटा कुनामा राखेर हेरौं अनि अलि फराकिलो विचार बनाऔं ।
समय आज विज्ञान र प्रविधिको बनेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा विश्व नै यो पंक्तिकारको एउटा साँघुरो कोठामा अटाइरहेको छ । अबको आधुनिकीकरण भनेको नेपालले त्यसको सिको गर्ने हो । अब पनि साध र कुलोका लागि पानी बाराबारको अवस्थामा रहने हैन । एउटा कुर्चीका लागि ढिकीच्याउ ढिकीच्याउ गर्दै लड्ने हैन । हामीले हिजो सुनेका पुराण र शास्त्रका कुरा, हावामा सुनका महलजस्ता लाग्ने कौतुहल्ताका प्रसङ्गहरू आजको समय र आधुनिकीकरणले सहज बनाएको छ । हिजोका कथा बन्ने ८५ वर्षे आमाबुबाका कुराहरू हामी आजको आधुनिकीकरणले गर्दा प्रत्यक्ष देखेका छौ । चन्द्रमामा कुकुर पुगेका कुरा त पुराना भए । अब त यस्तो समय आयो । मानिस चन्द्रमामा बासस्थान निर्माण गर्ने योजना बनाईरहेको छ ।
घरघरमा टेलिभिजनका च्यानलहरू जोडिएका छन् । प्रत्येक परिवारमा कम्प्युटर शिक्षाको आधुनिकीकरणसँगै इमेल इन्टरनेटका कुरा आएका छन् । तिनले झन् प्रष्ट देखाएका छन् । विश्व आधुनिकीकरणको समय र त्यसको सिको गरेका हामीहरूको हालत जस्ता सबै कुरा । त्यहाका मानिस बिहान जुरूक्क उठेर यन्त्रमानवको प्रयोग, निर्माण र खोज अनुसन्धानमा लागि रहेकाछन् । तर हाम्रो समाजका धेरै व्यक्तिहरू जुरूक्क उठेर भित्र र बाहिर गर्दै कसलाई फोन गरेर आज १० लाखको जग्गा २० लाखमा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा भट्याउँदैमा बित्छ । कुन टेलिसिलियलमा कसले लगाएको लुगा कुन पसलमा आएको छ । त्यो गहना नेपाली बजारमा आएको छकी छैन । सरकारमा रहेकाहरू आफ्ना हरूवा चरुवाहरू को बाँकी छन् जागिर लगाउनका लागि भन्दैमा व्यस्त हुन्छन् । एक तरिकाले त यो मनमा शान्ति ल्याउने, तनावरहित हुने तरिका हो । आफ्न्त नातागोता भर्ती गरेर धनको नाममा गरिने केही कुरा राम्रा छन् । तर आजको युगमा आएर त्यो आधुनिकीकरणको सिको गर्न सिकाउने बेला यो पक्का हैन । अबको आधुनिकीकरणको सिको गरौं त्यही कमल नेपालीबाट । झमक घिमिरेबाट ।
घरमा बसेर विदेशमा रहेका सन्तानसँग हेरीहेरी कुराकानी गछौं । त्यो ’boutमा सिको गर्न चिन्तन गर्ने विचार कसको जाने हो ? यहाँ कोही धर्मको नाममा भेदभाव छुवाछुतका कुरा गर्छन । कोही अझै अध्यात्मवाद र भौतिकवाद बीचको द्वन्द्वमा लड्छन् । दुःखी, गरीब, असहाय, भोका नाङ्गा, अनाथ, रोगी, वेसहाराको मर्म बुझ्न सकोस्न । त्यो पनि आधुनिकीकरण हो नी । त्यहा एउटा उपाय निस्कन्छ । त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउछ । दुःखी गरीबलाई सहयोग गरोस् । असहाय, बेसहारा र अनाथको सहारा बनोस् । भोका नाङ्गाको गाँस, बाँस र कपास बनोस् । सडक बालबालिकालाई एउटा उचीत मापदण्ड बनाओस् ती नै आज सपना जस्ता लाग्ने आधुनिकीकरणका सम्वाहक हुन । भोलि तिनै पनि बन्न सक्छन् कमल नेपाली, झमक घिमिरे, सगरमाथा र गौतमबुद्ध यसको सिको कहिले गर्ने ?
हिजो पुराणका भगवान जसले पृथ्वीबाट त्रिपुर शहर एक वाणमा नष्ट गर्थे भनेर हामी अझ् पनि सुन्छौं । आज उनीभन्दा शक्तिशाली अस्त्रहरू बनेका छन् जसले एक मिनेटमा एकैपटक सारा संसार ध्वस्त पार्न सक्छन् । त्यो सिको गरेको खै ? हिजो घोडामा चढेर सयर गर्नेहरूले नै वायुयान निर्माण गरिरहेका छन् । आज हाम्रा बाबुआमाले पुराणमा भगवान भनेर पुजेका कुरा आँखा अगाडि देखेका छौ । अझ् भनौं भने त्यो भन्दा धेरै शक्तिशाली काम गरिसके । हामी उनै गरुडपुराणका कुरा गछौं । रामायणका कुरा गछौं । गीता, सती, सावित्री र गोमाका कुरामा छौं । आज कसैले सोच्न भ्याएको छैन कि हिजो भगवान भन्नेहरू म आफै त्यो बन्नु छ । हिजो घोडामा लड्नका लागि भनेर बनाएका वाण म आफै बन्न सक्छु ।
यस्ता परिवर्तनका कुरा गर्दा विकलांक विचार, सनकी मानसिकता वितल परे पागल भन्न पनि बेर लाग्दैन । भन्छन् समयले हैन, समाजले पचाउन सक्दैन । त्यसलाई एउटा कुनामा राखेर अगाढि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भनेको दृढ आत्मविश्वास हो । तातो दुध निल्नु न ओकेल्नु हिजो भनेको उखान त्यही हो । यहाँ यस्ता कुरा तातो मुखमा राख्नु जस्तै हो । आज हामी यस्तो डरलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । बढेर आएको खहरेको बीचमा परेको जोखीम जस्तो । न खहरे पार गरेर पारी नै जान सक्छौ न त वारी नै आउन सक्छौ । हरेक कुरामा नयाँ र पुरानो बीचमा द्वन्द्व चलि नै रहन्छ । नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता, मूल्य मान्यता, अवधारणा र जीवन शैली आदि आदि कुराहरूले गर्दा आधुनिकीकरणको सिको गर्ने हामीहरूमै ठूलो द्वन्द्व चलिरहेको छ ।
राजनीतिमा आधुनिकीकरण हुनुपर्छ भन्यो भने कुन प्यानलको हो भन्छन् । जागिरमा श्रमको शोषण गर्नुहुदैंन भन्यो भने कुन पाटीको कार्यकर्ता हो भन्छन् । यस्ता अन्धविश्वास रूढीवादी परम्पराले अझै पनि हामीलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका सभ्यहरू । आफूलाई कितावका किरा ठान्नेहरू पढेलेखेका र नयाँ पुस्ता भनौंदाले एकमन विज्ञानको दर्शन छाँट्छन् अर्को मन अन्धविश्वासको भारि बोकेर हिडेका हुन्छन् । क्याम्पसमा पढ्नु छैन । मन्दिर गएर पास हँु कालो पाठो लिएर आउछु भन्छन् । शिक्षित, सभ्यता, विज्ञान, प्रविधि र आधुनिकीकरणको राम्रो अर्थ बुझेको व्यक्ति आसेपासेको विचारको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । हत्या, आतंक, बलात्कार, चारी र डकैतीका कुरा आए भने यहा कुनै कुराको चासो हुदैन । आधुनिकीकरणको पहिलो अस्त्र त्यहा प्रहार हुन्छ । धेरैथरिका यस्ता अर्थहीन कार्यहरू गरिन्छ । जसको कुनै अर्थ नै छैन । जो समयको माग हो त्यो आवश्यकता भित्र पर्दैन ।
चाडपर्वका कुरा गर्ने हो भने हिजो दर खाने कुरालाई कति पवित्र रुपमा हेरिन्थ्यो आजको समयमा दर शब्दलाई रक्सी र वियरमा कैद गरेको देख्न पाईन्छ । दशै ठूलाको आर्शिवाद लिने पर्व भनेको दशा बनाउदै छन् यस्तो समयको आधुनिकीकरणले उन्नती भन्दा उधोन्नती अवश्यम्भावी छ । तर त्यसका लागि आवाज वुलन्द पार्नु जरुर छ । हुन त समाजमा नयाँ पिंढी र पुरानो पिंढीबीच टकराव देखिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर समय यस्तो भयो की आजको आधुनिकीकरण आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको मात्र । समाज एक, अनेक सान्र्दभिक, असान्र्दभिक लक्ष्यहीन कुराहरू पनि रिती संस्कार र परम्पराको रूपमा विकसित भइरहेका छन् ।
परिवर्तन भन्ने कुरा निरन्तर हुने कुरा हो । जसको लागि लामो समय लाग्दछ । नयाँ क्रान्ति गर्नलाई त्याग र बलिदानीपूर्ण विचार लिन सक्नु पर्छ । क्रान्ति बोलीमा हैन व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । नयाँ चेतना, भावना, विचार र त्यसको कार्यान्वयनको उपज भनेको आधुनिकीकरण हो । जब नयाँ आवश्यकताको आभाष हुन्छ तब परिवर्तनका पक्षमा ताली बज्छ । आज विश्व विज्ञानले प्राविधिकरण भइसकेको छ । हामी बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेर आफ्नै ढर्रामा उभिन खोज्नु भनेको मुर्खता हो । यहाँ सबै नयाँपनको खोजीमा र परिवर्तनको पक्षमा छन् । उनीहरूलाई सुसूचित पारी हिंडाउने काम हाम्रो काधमा आएको छ । अब यही समयको आधुनिकीकरणसँगै समाज आधुनिकीकरणको सपना साचेर निस्कने हो की कसो ?
असफल गौतम (गौतम रानाभाट)
ठुलाडिही, ६ स्याङ्जा, हाल: पोखरा, शिक्षा: स्नातक
सम्पर्क: ९८४६०३१८३५, ashafal31835@yahoo.com
One response to “समय र आधुनिकीकरणको सिको गरेका हामीहरू”
Yam B. Ranabhat | 26/10/2010 मा 1:55 अपराह्न |
Hi good afternoon ! I like this article. I hope more like this article may continue in future. You are requested to Send thanks note to writer of this article.